किन बदलिँदै छ यो व्यवस्थाको नाम ? – Nepali Digital Newspaper
किन बदलिँदै छ यो व्यवस्थाको नाम ?
यसरी कम्युनिस्ट मूल्य, मान्यता र प्रचलनअनुरूपका राजनीतिक व्यवहारलाई गैरकम्युनिस्ट कित्ताले पनि आत्मसात् गर्दै आएका छन् । जसरी थाहै नपाईकन देश कम्युनिस्ट संस्कृतिअनुरूप चल्न शुरु भइसकेको छ, त्यसैगरी थाहै नपाई मुलुक ‘समाजवाद’मा पुग्ने पृष्ठभूमि अहिले बनिरहेको छ । यो जमानामा पनि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद (समाजवाद) सम्भव छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित गर्न प्रचण्डहरू निकै सूक्ष्म किसिमले क्रियाशील रहेका छन् । बाँकी पक्षले जानकारी पाउँदासम्म यिनले चियाङ काई सेकले जस्तै परिणति भोग्नुपर्नेछ ।